Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya oo sheegay in sargaal katirsan Al-Shabaab ay ku dileen magaalada Marka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaCiidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya oo sheegay in sargaal katirsan Al-Shabaab ay ku dileen magaalada Marka
September 12, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Dagaalyahan Al-Shabaab ah. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay dileen sargaal katirsan maleeshiyada Al-Shabaab.
Taliyaha Guutada 14-ka Oktoobar ee ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya Gaashaanle Dhexe Axmed Cabdi Cali ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in ay dileen sargaal katirsan Al-Shabaab xalay oo Arbaco ahayd.
Sargaalka oo lagu magacaabay Xuseen macalin Mujaahid Zubeyr ayaa la dilay kadib markii maleeshiyaad katirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen gudaha degamada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Sargaalka la dilay ayaa ahaa ku xigeenka madaxa amniyaadka Al-Shabaab ee magaalada Marka, sida uu sheegay taliyuhu.
March 3, 2020 Dagaal ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maleeshiyo daacad u ah wasiirka amniga Jubbaland ku dhexmaray Beled Xaawo